Musharax Axmed Macllim Fiqi waa Mas’uul u qalma Madaxtinimada Dowlad-gobaleedka Galmudug – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Musharax Axmed Macllim Fiqi waa Mas’uul u qalma Madaxtinimada Dowlad-gobaleedka Galmudug
Ambassador Axmed Macallim Fiqi oo ah Rug Caddaa Siyaasadeed oo in muddo ah ku soo guda-jiray Siyaasadda Somalia ayaa u muuqda Musharaxa ku guuleysan doona Doorashadda Madaxtinimadda ee Maamul-gobaleedka Galmudug eeloo codeeyn doono maalinta Sabtida ee soo socota kuna beegan bisha July 4-da.
Musharax Ambassador Axmed Macallim Fiqi oo Xilal Qaran soo qabtay, isagoo gaaray heer Ambassador iyo Agaasimaha Hay’adda Nabadsugidda Soomaaliyeed ayaa waxa uu bishii December 20-dii ee sannadkii hore shaaca ka qaaday inuu yahay Musharax u taagan xilka Madaxtinimadda ee Dowlad-gobaleedka Galmudug.
Ambassador Axmed Macallim Fiqi waxaa lagu xusuustaa isagoo dhisay Hay’adda Nabadsugidda Qaranka tayo ahaan iyo tiro ahaan iyo sidii uu kaalinta uga qaatay qorshihii Dagaalamayaasha Alshabaab looga saaray Goballadda Banaadir, Sh/hoose, Sh/dhexe, Gedo, Bay iyo Bakool.
Ambassador Axmed Macallim Fiqi waxa kaloo lagu xusuustaa Codkarnimadda uu ka muujiyey Dooddii Musharixiinta ee bishan June 23-dii ku dhex martay Hoolka Madaxtooyadda ee Degmadda Cadaado.
Doodaas oo uu Telefishinka Qaranka ee SNTV u qabtay Musharixiinta xilka Madaxtinimadda ee Galmudug, waxa uu Musharax Axmed Macallim Fiqi ka wada jawaabay dhamaan su’aalihii la weydiiyey, iyadoo ay jawaabihiisa u wada riyaaqeen Bulshadda ku nool Goballadda Dhexe.
Musharax Ambassador Axmed Macallim Fiqi waxa uu sheegay haddii uu ku guuleysto Xilkaasi inuu Bulshadda ku nool Goballadda Dhexe ku maamuli doono Caddaalad iyo Nidaam waafaqsan Horumarka iyo Kala Dambaynta sidii horey loogu bartay intii uu Xilalka Qaranka hayey.
Waxa uu hoosta ka xariiqay inuu culayska saari doono Maamul-wanaagga, Nabadaynta iyo in la horumariyo nolosha dhaqan-dhaqaale ee Bulshadda iyo in la ballaariyo Adeegyadda Waxbarashadda iyo Caafimaadka.
Dhinaca kale, Musharixiintii kale ee ka qeyb galay Doodda Musharixiinta u tagaan Xilka Madaxtinimadda Goballadda Dhexe, gaar ahaan Wasiirkii hore ee iska casilay xilkii Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka ee Dowladda Federalka, C/kariim Xuseen Guuleed ma bixinin jawaab ay ku qancaan Bulshadda Goballadda Dhexe.
Waxa Musharaxaasi lagu eedeeyaa inuu horey ugu fashilmay Xilkii Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka, isla markaana aan haatan lagu aamini karin xilka Madaxweynaha Dowlad-gobaleedka Galmudug ee uu isku soo sharxay.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inuu Musharax Ambassador Axmed Macallim Fiqi haatan yahay Mas’uulka la hadal-hayo inuu ku guuleysan doono Hoggaaminta Dowlad-gobaleedka Curdanka ah ee Goballadda Dhexe oo haatan lagu yegleelayo magaalladda Cadaado oo Caasimad u ah Maamulka Xibin iyo Xeeb.
Musharax Ambassador Axmed Macallim Fiqi ayaa haatan ugu cadcad Musharixiinta kale ee hanka ka qabto Xilka Madaxweynaha, iyadoo Musharixiinta kale yihiin kuwo aan Sumcad ka haysanin guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed, kuna soo fashilmay Xilalkii Qaran ee ay horey u soo qabteen.
Dadka gorfeeya Arrimaha Siyaasadda ayaa rumeysan in halbeegga xilka Madaxtinimadda laga dheehan karo Natiijadda Cod-bixintii shalay ee xilka Guddoomiyaha Barlamaanka cusub ee Galmudug oo uu ku guuleystay Musharax Cali Gacal Casir.
Marka laga amabqaado Nidaamka Codbixintaasi waxaa hubaal ah inay muuqdaan ifafaalo wanaagsan, oo dhabaha u xaarayo inuu Musharaxa Ambassador Axmed Macallim Fiqi codka ugu badan ku helo Doorashadda lagu madalsan yahay bisha soo socota ee July 4-da.
Haddaba, markaynu falaanqeyn guud ku samayno Musharixiinta kale ee u taagan xilka Madaxtinimadda Galmudug waxaa la soo qaadan karaa Musharax C/kariim Xuseen Guuleed oo la sheego inuu taageero ka haysto, kuna xiran yahay Aqalka Madaxtooyadda ee Villa Somalia.
Waa hubaal inuusan Musharax Ambassador Axmed Macallim Fiqi ahayn Musharax la wato, waxaana taasi laga dheehan karaa Kalsoonidda uu ku dhex leeyahay guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan Beelaha kuwa ku wada nool Goballadda Dhexe oo iyagu qirsan inuu Ambassador Axmed Macallim Fiqi yahay Halyeey iyo Waddani khibrad u leh Maamulka iyo Maareynta Dowladmimo.
Qiimeyn lagu sahminayo Kala horreynta Musharixiinta Madaxtinimadda Galmudug, ayaa waxay muujinaysaa inuu Musharax Ambassador Axmed Macallim Fiqi ku horreeyo Sahanka cod-bixinta ee la dhex dhigay Aqoonyahannadda, Siyaasiyiinta iyo Waxgaradka ku sugan magaalladda Cadaado.
Musharax C/kariim Xuseen Guuleed iyo kuwa kale ayaa rajo kooban ka leh Xilka Madaxtinimadda ee Dowlad-gobaleedka Galmudug, waxaana taasi laga dheehan karaa heerka hoose ee Firfircoonidooda Siyaasadeed iyo galaangalkooda ku aadan Arrimaha Bulshadda.
Markaynu doc kasta ka eegno Doorashadda Madaxtinimadda ee Dowlad-gobaleedka Galmudug waxaa aad loo hadal hayaa in uu Musharax Ambassador Axmed Macallim Fiqi yahay Madaxweynaha cusub ee loo dooran doono Dowlad-gobaleedka curdanka ee Galmudug.
Somali President reiterates commitment of election in 2016